လေနုအေး: Singapore Garden Festival
Posted by တန်ခူး at 3:13 PM
အပြာရောင်ပန်းလေးတွေ အရမ်းသဘောကျတယ်း) တင်ပေးတာ ကျေးဇူးအစ်မ ။
ဒီဘလော့ဂ်လေးကို ခုမှ စရောက်ဖူးတာပါ။ ပန်းလေးတွေကြည့်ရတာ စိတ်အေးချမ်းပါတယ်။ ဒီဇိုင်းအဆန်းတွေလဲ အများကြီးပဲ တွေ့ရတယ်။ ပုံလေးတွေ ဝေမျှတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပဲ ညီမရေ။
ဟယ်.. မရေ... ပျော်စရာကြီးနော်.. ပန်းပြပွဲတွေဆိုတော့ တခြားပန်းမျိုးအစုံ အပင်မျိုးစုံလည်း တွေ့ရတာပေါ့။ တချို့အပင်တွေဆိုရင် မမြင်ဖူးဘူးရယ်.. ဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့ အတူ ကြည့်ရတော့ ပန်းခြံထဲရောက်သွားသလိုပဲ..ဟို အန်တီကြီး ရဲ့ ခြံထွက်သစ်သီးနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆွဲခြင်းကြီး လိုချင်လိုက်တာ.. အဟီး.. သစ်ခွပန်းတွေကလည်း ထူးထူးခြားခြားပဲ။ အဲ.. အဲဒီနောက်ဆုံးက ပန်းက ခေတ္တာပန်းတဲ့လား.. အင်.. နာမည်တော့ မသိဘူးရယ်.. အဖြူရောင်တော့မြင်ဖူးတယ်.. အနံ့က သင်းသင်းလေးမို့ အဲဒီပန်းကို သဘောကျတယ်... :)
ပုံရိပ်တော့ မြေရှိရင် စားပင်သီးပင်လေးတွေ စိုက်ချင်တယ်။
ရေမပါဘဲ စိုက်လို့ရတဲ့ ကန်ဇွန်းရွက်ကို စိတ်ဝင်အစားသား။ အညာမှာလည်း ရှိတော့ရှိတယ်။ ရေမရှိတဲ့နေရာက ကန်ဇွန်းရွက်က နည်းနည်းသေးတယ်လို့ ထင်တယ်။
နောက်များကြရင် စောစောလေး သတင်းပေးပါ တန်ခူးရေ.. နော်..။
အမရေ.. ပန်းတွေလာကြည့်တယ်။ အောက်ဆုံးက ဟာက ခတ္တာပန်းလား... တခါမှ မတွေ့ဘူးတော့ အဲဒီပန်းကို တွေ့တာတောင် ဘာပန်းမှန်းသိဘူး
အမ.. ကန်စွမ်းရွက်ကို မြေကြီးနဲ့စိုက်တာလား
မြတ်နိုး ဒီနှစ် စိုက်တယ်.. ဟီး တခါတောင် ချက်စားပီးပီ။
ဥယျာဉ်ထဲကို အလည်လာသွားပါတယ်း-)
အိုးပုတ်ပန်းလေးတွေတော့ မှီမှာမဟုတ်ပါဘူး မောင်မျိုးရေ…
မ ရေ … လာလည်တာ ကျေးဇူးပါ… နောင်လဲ လာလည်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်….
နုရေ…ခေတ္တာပန်းကို လီလီလို့ ခေါ်ကြတယ်… ဘုရားတင်ထားရင် တအိမ်လုံးအနံ့ လေးကို သင်းလို့ …
ပုံရိပ်ရေ…အမလဲ မြေကြီးဝယ်ပြီး အိုးလေးထဲ ဖြစ်အောင် စိုက်ရတာ… အိမ်များ သိပ်လွမ်းတာပဲ…
ကိုပေါရေ… ရေပိုက်တလျှောက်မှာ အပေါက်လေးတွေ ဖေါက်ပြီး စိုက်တာပါ… ရေသွားရာ တလျှောက်ဆိုတော့ ထူးပြီးရေလောင်းစရာ မလိုတော့ဘူးပေ့ါ…
ဒီနှစ်တော့ ပြီးသွားပြီပန်ရေ… နောက်နှစ်ကျရင် လက်တို့ လိုက်မယ်နော်….
သက်ဝေရေ… ဟုတ်တယ်…တင်တာနောက်ကျသွားတယ်… နောက်ဆို စောစောပြောမယ်နော်…
ဟုတ်တယ်မြတ်နိုးရေ… ဂျပန်က ပန်းပေါတော့ ရှိလိမ့်မယ် ထင်တယ်… ကန်ဇွန်းရွက်ကို ရေနဲ့ စိုက်တာပါ… မြတ်နိုးက စိုက်စားပြီးသွားပြီပေါ့… တို့ လဲ စိုက်ကြည့်ဦးမှ….